Xogsheeg Media Network » Shariif Sh.Axmed oo Hanti adag kala tegay Ganacsato beeshiisa ah (Warbixin).
Home » Wararka » Shariif Sh.Axmed oo Hanti adag kala tegay Ganacsato beeshiisa ah (Warbixin). Shariif Sh.Axmed oo Hanti adag kala tegay Ganacsato beeshiisa ah (Warbixin).
Posted by saadaam on Nov 17th, 2012 // 2 Comments	Khilaaf aad u xoogan ayaa soo kala dhaxgalay qaar kamid ah qaraabada Shariif Sheekh Axmed maalin kadib markii uu shariif isaga huleelay dalka Somaaliya.
Ciidamada AMISOM ayaa xoog ku kala eryay dad careysan oo shalay isugusoo baxay garoonka diyaaradaha Muqdisho oo xiligaasi ay taagneed diyuurad dalka Uganda u qaadi laheed shariif Sheikh Axmed.
Qandaraaslayaal iyo shaqaale ka shaqeyn jiray madaxtooyada Villa Somaliya ayaa shariif ka tabanaya in uu kala tegay lacago boqolaal kun oo dollarka mareykanka ah.
Mid kamida ganacsatada uu shariif lacagta kala tegay ayaa ku wareegay maqaayad VIP ah oo uu shariif ku lahaa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir, odayaal dhaqameedyo beesha shariif ah ayaa wado dadaallo ay beesha uga aruurinayaan lacago qaaraan ah.
Ganacsatada qandaraaslayaasha ubadan ayaa wado dadaallo ay madaxweyne Xasan Sheekh uga dalbanayaan in uu bixiyo hantidii ay shariif ku lahaayeen.
Dhinaca kale gacan ka hadal ayaa dhaxmaray xaasaska shariif sheekh Axmed waqtigii ay garoonka kasii dhoofayeen, goob joogayaal ayaa sheegay in laba kamid ah xaasaska shariif ay ku dagaalameen gudaha garoonka.
Ciidamada AMISOM ee garoonka ilaalada ka haya ayaa muddo saacada ah xanibay sofarka shariif waxayna su’aalo weydiiyeen labada xaas ee dagaalanta, shariif ayaa ku guuldaraystay in uu heshiisiiyo xaasaskiisa illaa khilaafka kajira gurigiisa banaanka usoo baxo.
Tags: Wararka « Warka kahoreeyaQabaa’illo iyo Siyaasiyiin Caan ah oo soo saaray Bayaan ka dhan ah Faroole.	Warka xiga »Isra’el oo kordhisay Weerarada Bahalnimo ee ka dhanka ah Shacabka Gaza.	2 Responses
Mary says:	November 28, 2012 at 01:09	Al-Salaamu Calykum wa raxmatulhi wa baarakatuSalaam ka bacdiWaxaynu gallay tobankii maalmood ee bisha barakaysan ugu dambbeeyey, waxaan leeyahay ilaahay bisha barakeysan khayrkeeda ha inna siiyo, Soonkeenna, Salaadeenna iyo Ducadeennaba ha innaga aqbalo. AamiinAnnigoo ka mid ahaan jiray indheergaradkii Xisbigii Qaran, waxaan aad ugu farxay iscasilaadda Wasiirka, Dr. M. A. Gabboose, anigoo aad iyo aad ugu kalsoon inuu waddan dawadiisa gacan ku hayo isagoo Ilaahay la kaashanaya, Ummadda reer Somalilandna sidaasey ku calool sanyihiin iyagoo si weyn oo fooqal xad ah ugu Kalsoon Dr. Gaboose, Waayo Waxay Somalidu tidhaa Ninkaad kabaha ka toloneysid Kabbihiisaa la eegaa . Dr. Gaboose waa nin dhakhtar ah waxaanu ka gaadhey dhakhtarnima inuu noqo dhakhtarkaa dhakhtaradda caalamka ugu caansan, taasi waxay ku tuseysaa inuu DR. Gaboosse mareegtii loo egmadaba kasoo baxayo, isla markaa nin aqoonsan inaan Qabyaalad iyo Qarannimo meel aaney wada geleyn oo aqoonsan Qaranimada Somaliland, maanta laga bilaabana Xisbiga ka mid ayaan ah.Waxaan haddalkaygii kusoo gabgebeynayaa Dr. Guleysoo annaa waanu garabtaagannahay haddii eebbe yidhaa.Waa GuulCabdiraxman M. CumarJubail. KSA
Reply	Naciima aadan says:	December 27, 2012 at 05:19	Asc wr wb wlh run ahanti waan la dhacay sida qiirada leh ama aad hosha bulshada ugu qabatan marka ilaahay ha idinla garab galo hosha aad bulshada uhesaan aamin
Tuug si cajiib ah uga xaday Hooyo canugeeda oo Laba Bil Jira
Fanaanada Madonna Oo La Sheegay Inay Xaraashayso Dharkeeda Si Lacagta Ka Soo Baxda Ay Ugu Caawiso Laanqayrta Cas
Obama: Ma Noqon Doono Wiilkii Dhalinyarada Hanti-wadaaga Muslimka Ahaa
Ciyaarta Legdinta Haweenka Senegal: Oo Noqotay Tartamada Loogu Jecel Yahay Kana Horreeya Kubada Cagta
Shariif Sh.Axmed oo Hanti adag kala tegay Ganacsato beeshiisa ah (Warbixin).
Xil sugayaashii Xilalka Waayay oo Qurbaha u jiheysanaya.
Fanaanadda Nasteexo Indho oo Wacdarro kadhigtay Barnaamijka Xidiga SNT “DAAWO”
DAAWO VIDEO Qarixiii Maanta Kadhacay Baar Village
Xukuumadda Cusub Oo Muqdisho laga taageeray.
© 2012 Xogsheeg Media Network · RSS · Designed by MAK · Powered by WordPress